Zonke iiHarry Potter zokusebenza kunye nemidlalo ye-Android | Izikhokelo ze-Android
UIgnacio Lopez Sala | 07/05/2021 08:41 | Imidlalo ye-Android
Akukho mntu unokuyiphika loo saga UHarry Potter uye waba sisisulu kwihlabathi liphela Ngoncwadi nakwimiboniso bhanyabhanya eguqulelwe kwizicelo, kwimidlalo, kwiipaki zemixholo ... kwaye ngokungathandabuzekiyo kwaphawula isizukulwana.
Ngaphandle kwempumelelo yale saga, kwiVenkile yokuDlala asinayo Inani elikhulu lezicelo kunye nemidlalo. Ukusuka apho, kuya kufuneka sithabathe uninzi lwazo, ngakumbi usetyenziso, alukho ngeSpanish, ngenxa yoko isiphumo sokugqibela asibanzi.
Ukuba ufuna ukwazi ukuba yintoni yonke IiHarry Potter zokusebenza kunye nemidlalo ye-Android ecosystemNdiyakumema ukuba uqhubeke nokufunda ukuze uyifumane. Zonke izicelo kunye nemidlalo ziseSpanish.
1 Imidlalo kaHarry Potter ye-Android
1.1 UHarry Potter: ii-Wizards Zihlangene
1.2 UHarry Potter: I-Hogwarts Mystery
1.3 LEGO Harry Potter: Iminyaka 1-4
1.4 LEGO Harry Potter: Iminyaka 5-7
2 IiHarry Potter ze-Android
2.1 Yiphi eyakho indlu?
2.2 Izitikha zamaWizard zeMuggles
2.3 Spelly - uHarry Potter upela
2.5 Imibuzo yeHogwarts
2.6 Iphephadonga leHogwarts HD
Imidlalo kaHarry Potter ye-Android
UHarry Potter: ii-Wizards Zihlangene
Ndikunye noHarry Potter: iiWebhu ziyamanyana, iNiantic iyafuneka uqalise kwakhona imodeli yeshishini eyenzileyo ngePokémon GO, umdlalo wokwenyani ongezelelweyo ongakhange ube nawo, kude kube ngoku, impumelelo efanayo nale Nintendo yakudala.
Ndiyabulela kwinyani eqinisekisiweyo, ngalo mdlalo unako phinda ufunde amanye amaxesha owathandayo kule saga kunye neZilwanyana eziMangalisayo, apho kuya kufuneka ufumane amakhulu ezinto zomlingo, abalinganiswa, izidalwa kunye neenkumbulo zehlabathi lomlingo.
Enkosi kwiiPortkeys, unako Hambisa kwiindawo zakho ozithandayo kweli hlabathi lomlingo Njengeofisi kaDumbledore, igumbi likaHagrid, ivenkile ka-Ollivander kunye nokunye okuninzi.
UHarry Potter: Ukudibanisa iiWebhu kuyafumaneka kweyakho khuphela mahala, Ifuna i-Android 5.0 okanye kamva kwaye ibandakanya ukuthengwa ngaphakathi nohlelo.
Umthuthukisi: Niantic, Inc.
UHarry Potter: I-Hogwarts Mystery
Imfihlakalo yeHogwarts yi dlala indima egcwele oomabophe, izidalwa zomlingo kunye nezinto ezimangazayo ezifihliweyo apho kufuneka sibeke umnqwazi wokuvavanya umhlaba wobugqi ngelixa sikhetha eyethu i-adventure.
Kulesi sihloko oko xuba umlingo, imfihlakalo kunye nokuzonwabisa kwiindawo ezilinganayoKuya kufuneka ufumane ubugqi, sebenzisa izakhono zakho ukutyhila iimfihlakalo zeHogwarts kwaye ufumane inyani ngasemva kweendawo eziqalekisiweyo kunye nesizathu esikhokelele ekunyamalaleni komntakwaboHarry.
UHarry Potter: Imfihlakalo yeHogwarts iyafumaneka kweyakho khuphela simahla, ayibandakanyi iintengiso kodwa ukuba uthenga kumdlalo. Ngokukhutshelwa okungaphezulu kwezigidi ezingama-50 kunye nomndilili ophakathi weenkwenkwezi ezi-4,6 kwezi-5 kunokwenzeka, esi sihloko yenye yezona midlalo zibalaseleyo zikaHarry Potter ezikhoyo kwiVenkile yokuDlala.
LEGO Harry Potter: Iminyaka 1-4
Lo mdlalo ujikeleze Iincwadi ezine zokuqala zikaHarry Potter kunye neemovie ezinesimbo se LEGO, ke ukuba uyayithanda yomibini imixholo, awunakuphuthelwa ngumdlalo odibanisa ubumnandi kunye nokuhlekisa kwiindawo ezilinganayo njengoko abadlali behlola umhlaba wobugqi kwaye bengena iiHogwarts.
Imidlalo ye LEGO yee-mobiles ze-Android
LEGO Harry Potter: Iminyaka 1-4 ibandakanya iNdebe yeHlabathi yeQuidditch, i-Triwizard Tournament, ukudibana no-Aragog, umlo ngokuchasene ne-basilisk kwi-Chamber of Secrets kunye nokujongana no-Voldemort uqobo.
Los ulawulo lwe-screen Banomdla kwaye ungabamba ngokukhawuleza ukuba baphonononge, basombulule iiphazili, i-duel ... ibandakanya ngaphezulu kwe-100 yoonobumba, uyilo lomlo, benza amakhulu emishini yomlingo ...
I-LEGO Harry Potter: Iminyaka 1 ukuya ku-4 yile iyafumaneka kwiVenkile yokudlala ye-5,49 euro kwaye ifuna ubuncinci i-Android 6.
Umthuthukisi: Isilumkiso Bros. Amashishini oMhlaba jikelele
LEGO Harry Potter: Iminyaka 5-7
I-LEGO Harry Potter: Iminyaka emi-5 ukuya ku-7 yiyo Inxalenye yesibini yetayitile edlulileyo apho kuboniswa khona iminyhadala yeencwadi 5º ukuya ku-7º Kwi-adventure ye-LEGO apho idabi lokugqibela phakathi kokulungileyo nokubi lilwelwa neNkosi Valdemort nalapho sifumana ubuso obutsha, izifundo, imiceli mngeni kunye noqeqesho.
Kwesi sihloko, sivavanya iimeko ezintsha njenge-Grimmauld Place, iSebe lezobuGcisa kunye noGodri's Hollow kunye neendawo ezibonakalayo kwi-saga efana neHogwarts kunye neDiagon Alley. Esi sihloko, njengangaphambili, sisivumela ukuba silawule umlinganiswa ngendlela elula kakhulu enkosi kulawulo lokuchukumisa olusinika ukufikelela ngokukhawuleza kuzo zonke iintshukumo ezikhoyo.
Esi sihloko sithi iyafumaneka kwiVenkile yokudlala ye-5,49 euro kwaye ifuna i-Android 6.0 okanye kamva. Ukongeza, iyasivumela ukuba songeze i-Duel Club yokwandiswa kobugcisa bokuqhubela phambili ngokuchasene nabathakathi abadumileyo kunye namagqwirha anje ngoSnape, uKingsley Shacklebolt kunye neNkosi uVoldemort.
Ukuba ugcina iiglasi zokwenyani apho kuya kufuneka usebenzise i-smartphone yakho njengescreen, unga Yonwabela imidlalo yeQuidditch ngesi sihloko ngemizobo ye-3D kumntu wokuqala apho kuya kufuneka uvavanye izakhono zakho ngomtshayelo.
Ukuze sonwabe kwesi sihloko, sinako khuphela simahlaIsixhobo sethu kufuneka silawulwe yi-Android 4.4 okanye ngaphezulu.
Umthuthukisi: Imidlalo yeBatschi
IiHarry Potter ze-Android
Yiphi eyakho indlu?
Ngale sicelo unakho yazi ukuba ukhona uSlytherin njengoMalfoy, uHufflepuff, uRavenclaw okanye uGryffindor njengoHarry Potter. Kuya kufuneka uphendule imibuzo embalwa elula ukufumanisa ukuba ungowakwenyani na iHogwarts.
Yiphi eyakho indlu? iyafumaneka kweyakho khuphela simahla kwaye kubandakanya iintengiso. Ifuna i-Android 4.1 okanye kamva kwaye ayibandakanyi naluphi na uhlobo lokuthenga ngaphakathi nohlelo.
Umthuthukisi: Izitudiyo zeapppain
Izitikha zamaWizard zeMuggles
Ngalesi sicelo unayo inani elikhulu lezincamathelisi ngamnye kubo bonke abalinganiswa kwiharga Potter saga. Unokwabelana ngezi zincamathelisi nangasiphi na isicelo semiyalezo, nokuba kungoWhatsApp, iTelegram ...
Iipasile ezingama-29 ezilungileyo zeWhatsApp
Izitikha zeMagi zeMuggles ziyafumaneka kwezakho khuphela simahla kwaye kubandakanya iintengiso kodwa akukho kuthengwa kwangaphakathi nohlelo.
Izitikha zeMagi zeMuggles, iWastickerApps
Umthuthukisi: Usesho lweZwi
Spelly - uHarry Potter upela
Ukuba awukwazi khumbula onke amazwi kaHarry Potter Ungasebenzisa isicelo se-Spelly, isicelo apho unokufumana khona nganye yeentsingiselo zokuqala zikaHarry Potter onokuthi uququzelele ukhuphiswano phakathi kwabahlobo bakho ukufumana ukuba ngubani onolwazi ngakumbi.
Zonke iziphonso ziyafumaneka ihlelwa ngokwamacandelo, sinokufaka iifayile zokukhangela ukufumana enye esiyifunayo, siyiphawule njengezintandokazi… I-Spelly - i-Harry Potter spells ifumaneka ukukhuphela mahala, iqulethe iintengiso kwaye ifuna i-Android 4.0.3 okanye kamva.
Spelly-uHarry Potter upela kunye nemibuzo!
Umthuthukisi: Umda wedijithali
Njengoko unokuqikelela kwigama lesi sicelo, iPotterzone yi Indawo yokudibana yabo bonke abalandeli besaga seJK Rowling. Isicelo sibandakanya uthotho lweefilitha zokuthatha iifoto ngezinto ezingathandabuzekiyo ezifana neziglasi zikaHarry kunye necandelo apho sinokufumana khona iindaba zamva nje.
Ukuze ukwazi ukonwabela esi sicelo, i-smartphone apho siza kufaka khona usetyenziso kufuneka ilawulwe yi-Android 5.1 okanye kamva. Iyafumaneka eyakho khuphela simahla kwaye ayibandakanyi ukuthengwa kwangaphakathi nohlelo okanye iintengiso.
Esinye isicelo esivumelayo bonisa ulwazi lwethu lweenoveli zeJK Rowling Siyifumana kwi-Quarts Quiz, isicelo esinemibuzo engaphezulu kwama-200, iindlela zemidlalo ezi-4 kunye namanqanaba asi-8 obunzima. Ukuba ufuna ukuvavanya ulwazi lwakho kunye nolwabahlobo bakho, iHogwarts Quiz sisicelo osifunayo.
I-Hogwarts Quiz iyafumaneka kweyakho khuphela mahala, kubandakanya iintengiso kunye nokuthenga ngaphakathi nohlelo ukususa iintengiso kunye nokufikelela kuwo wonke umxholo weapp. Ifuna i-Android 4.4 okanye kamva.
Imibuzo yeHogwarts HP
Iphephadonga leHogwarts HD
Ukuba uthanda amaphephadonga, kunye neHogwarts Wallpaper HD unayo Inani elikhulu lemifanekiso onokuyisebenzisa njengephepha lodonga lwesixhobo sakho. Esi sicelo sifumaneka simahla simahla, kubandakanya iintengiso kodwa akukho kuthengwa kwangaphakathi nohlelo.
Umthuthukisi: Andi mayong
Umendo opheleleyo kwinqaku: Izikhokelo ze-Android » Imidlalo ye-Android » Zonke iiHarry Potter zokusebenza kunye nemidlalo ye-Android